SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Blue-and-yellow macaw. Yakareba masendimita 85 kubva kumuromo kusvika kubesu
MAVARA anoyevedza anoti vai vai pamusoro pemiti yemusango, shiri zvadzinobhururuka dzakawanda dzichienda mudenga! Izvi zvakashamisa vaongorori vainge vasvika kuCentral neSouth America vachibva kuEurope pakupera kwemakore ekuma1400. Vakaona shiri dzinonzi mamacaws. Shiri idzi rudzi rwemaparrots ane mabesu marefu uye dzinogona kuwanika munzvimbo dzinopisa uye dzinonaya mvura yakawanda kuAmerica. Pasina nguva, mifananidzo yezvisikwa izvi zvinoyevedza yainge yava kuonekwa pamamepu enharaunda yacho sechiratidzo cheparadhiso yainge ichangobva kuwanikwa.
“[Mwari] akaita zvinhu zvose zvakanaka panguva yazvo.”—Muparidzi 3:11
Hono nehadzi yacho dzinowanzogara dzese kweupenyu hwese, uye dzinobatsirana pakuchengeta vana vadzo. Marudzi akasiyana-siyana eshiri idzi anokandira mazai mumhango (buri rinenge riri pamuti), mumwena inenge iri pamahombekombe erwizi nepachuru, kana kuti mumwena inenge iri pamawere. Ipapo unogona kuona hono nehadzi dzacho dzichibvisana tsvina paminhenga. Vana vacho pavanosvika mwedzi 6, vanenge vanyatsokura, asi vanoramba vachigara nevabereki kwemakore anenge matatu. Kana dziri musango shiri idzi dzinorarama makore 30 kusvika ku40, asi dzimwe dzaichengetwa nevanhu dzakararama makore anopfuura 60. Kune mhando dzinopfuura 18 dzeshiri idzi uye dzimwe dzacho dziri kuratidzwa pano.
Green-winged macaw, inonziwo red-and-green macaw. Yakareba masendimita 95 kubva kumuromo kusvika kubesu
Scarlet macaw. Yakareba masendimita 85 kubva kumuromo kusvika kubesu
Hyacinth macaw. Yakareba masendimita anosvika 100 kubva kumuromo kusvika kubesu. Ndiyo hombe pamaparrots ose, inogona kupfuura 1.3 kg pauremu